We.com.mm - ရွှေစုံတွဲဖြစ်နေပြီဆိုတာသေချာသထက်သေချာသွားစေတဲ့အချက်များ
ရွှေနှစ်ရွှေ စုံတွဲဖြစ်နေလို့ ရွှေစုံတွဲဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေထွက်နေတာကြာပြီဆိုပေမယ့် ရွှေထူးဟာ ရွှေထူးလို့မဖြစ်ခင်ကတည်းက ဘေးနားမှာ အားပေးလာ၊ ချစ်လာခဲ့တဲ့ ချစ်သူလေး ပန်ကိတ်ဒါဒါ နဲ့ပြတ်စဲထားတာမကြာသေးတာရယ်၊ ရွှေမှုံကလည်း တစ်မောင်တည်းမောင် ခဲ့တဲ့ချစ်သူနဲ့ပြတ်သွားတာမကြာသေးတာကြောင့် ပရိသတ်တွေတော်တော်လေးဇဝေဇဝါဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကပဲ ရွှေနှစ်ရွှေ စုံတွဲဖြစ်နေကြောင်း ဓာတ်ပုံတွေပလူပျံအောင်ထွက်လာတဲ့အပြင် သူတို့တွေဘန်ကောက်မှာ လျှောက်လည်နေကြတဲ့ ပုံတွေထွက်ပေါ်လာတာဆိုတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီဆိုတာ သေချာလာပါတော့တယ်။
အဲ့ထက်ပိုပြီးသေချာစေတဲ့အချက်တွေကတော့ ရွှေထူးဟာ သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ တက်တူးအသစ်လေးတစ်ခုထိုးခဲ့ပြီး အဲ့ဒါရွှေမှုံ့အတွက်လို့သိတဲ့သူတွေကပြောနေကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ရွှေမှုံဆိုသည်မှာ သူ့ကိုယ်သူ သဲ .. သဲ နဲ့ပြောနေတာဖြစ်ပြီး ရွှေထူးထိုးထားတဲ့ တက်တူးက အနက်၊ အနီရောထားတဲ့ အသည်းပုံဖြစ်နေလို့ပါ။ နောက်ပြီး ရွှေမှုံရဲ့ My Day မှာတင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံကို ရွှေထူးရဲ့ သီချင်းသစ် Candy ကိုရည်ညွှန်းတဲ့ သကြားလုံးပုံ၊ စုပ်ပြားပုံ စတစ်ကာတွေနဲ့တင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ ရွှေစုံတွဲဖြစ်ဖို့သေချာသလောက်ဖြစ်သွားပြီလို့ ဖန်တွေယူဆနေကြပါတယ်။
ဒါဒါကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာမှပြောဆိုခဲ့တာမရှိပဲ status လေးတစ်ခုပဲတင်ခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး သူမရဲ့ ဘွဲ့ယူနေတဲ့ဘွဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် နဲ့ IG ပေါ်မှာတင်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လိုမြင်ကြသလဲ …. နှစ်တွေအကြာကြီးတွဲလာတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုဖြတ်ပြီးနောက်တစ်ယောက်နဲ့လက်ချင်းချိတ်လိုက်သူတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ရေးဟာ ပျော်ရွှင်ရမယ်လို့ထင်လား …. ဒါမှမဟုတ် တခြားတစ်ယောက်ရဲ့ နာကျင်မှုကို ခုတုံးလုပ်လိုက်တဲ့ ကိုရွှေထူး တစ်ယောက် ဝဋ်လည်မယ်လို့ထင်သလား …..
အားလပ်ချိန်လေးမှာ ဇနီးချောလေးနဲ့ သားလေးကို ဘုရားဖူးလိုက်ပို့ခဲ့တဲ့ မြင့်မြတ်တို့ မိသားစုလေး
အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်က ဝါသနာမတူတဲ့ သူတို့ ညီအစ်ကို နှစ်ဦး